AMAKHAYA AMA-TOP 5 ATHUSAYO - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
*Isexwayiso* Ungene endaweni eyethusayo yeNetEnt Casino, enezikhala ezinama-atmospheres akhululeke kakhulu, izinhlamvu zomgogodla-chillingest kanye nezindawo zokukhokha ezikhokha izinwele (lena kuseyimidlalo yasekhasino phela!)
Ukugqoka izinsimbi zabantu abadala, uma kungenzeka ukuthi unesabe okuncane, kwamukeleka ngokuphelele emphakathini lapha, ngakho-ke donsela lawo maphepha bese siqala ...
I-1) I-Wolf's Bane
UPablo Escobar, ugqozi lukaNarcos, ngokudelela wanikeza izimbangi zakhe izinqumo ezimbili - isiliva noma ukuhola.
Isivumelwano ku 'The Wolf's Bane' sibi kakhulu - isiliva noma esifile. Uma ungenazo izinhlamvu zesiliva, udla isidlo seWarwolf esolisayo nesinamandla.
Lokhu I-5 Reel, 3 irowu ne-10 Payline video slot inezici eziningi ezijabulisayo ezizokugcina udlala, noma ngabe ukhulule kangakanani ngethimba lomsindo.
Lokho kusho okuthile ngoba imisindo yasemuva yasemkhathini ethambile isiza ngempela ukwenza lo mdlalo ube yinto ekhethekile, ngakho-ke ukuhalalisela ithimba lokuklama imisindo yeNetEnt!
Zihlole ukuthi ungazitholela kanjani umsindo ngokuchofoza kumdlalo ongezansi:
Amagesi xpress Amakhasino
I-High Roller Casino
Amakhasino e-Hot Forex
Hot Line Amakhasino
Amakhasino weHunky Bingo
iNetBet Euro Amakhasino
I-Jackpot 21 Casino
I-Jackpot Capital Casino
I-Jackpot Fuity Casino
Amakhasino weJelly Bean
Jet Bull Amakhasino
Jingle Bingo Amakhasino
Joe Fortune Amakhasino
I-La Fiesta Casino
I-La Vida Casino
I-Lady Fortune Casino
I-Lets Bet Casino
Lucky Dino Amakhasino
Lucky Me Slots Amakhasino
Lucky Star Amakhasino
LV BET Amakhasino
I-Magic Wins Casino
I-Mandarin Palace Casino
I-Manhattan Slots Casino
Amakhaya eBet Casino
2) I-Halloween Jack
Abantu abaningi bazosebenzisa i-Halloween ingabi namlenze - mhlawumbe ngokuzama amanye ama-cocktails we-Halloween anama-spooky-kodwa-ngethemba, ngeke babe nokukhanda, njengenkanyezi yeNetEnt's Halloween Jack.
Uma nithanda imfihlakalo, izihogo zesihogo namakhanda wethanga wezinkukhu - lo mdlalo wenzelwa wena. Kususelwa endabeni eyethusayo nge-Horseless engenamakhanda, isipikili esidonsa lapho sifuna i-noggin yayo.
Okwenzelwa okuncane phakathi kwethu abathanda nje umdlalo omuhle wama-slot, lena futhi yinto enhle kakhulu ngaleso sizathu.
I-Halloween Jack i I-5 Reel, 3 irowu slot enemigqa ekhokhwayo ye-20 futhi inezici ezimbalwa ezithokozisayo ezifana ne-Walking Wilds, Free Spins ne-Special "UJack 'o' Lector”Imodi.
Yini ekhethekile ngale ndlela? Hhayi-ke, unikwe umsebenzi wokuqongelela izimpawu zesibani ku-slot reel, okuzokuvuza nge-1 ye-3 yezimanga ezijabulisayo zesilo sasendle:
Izibani ze-3 = i-Hack Wild Hound Wild Hack
Izibani ze-6 = i-Stacked Jack 'o' Lantern Wild
Izibani ze-9 = Okhulayo Wokubutha Ukufa Kwasendle
I-3) I-Blood Suckers 1 ne-2
Uma womela okuthile okubomvu, okunambitheka ngensimbi nokungajwayelekile, lapho-ke sinemidlalo emibili yakho.
Uchungechunge lweNetEnt's Bloodsuckers lungenye yezindlela ezidume kakhulu futhi ezikhokhela ukuhlonipha bobabili obunesitayela nobubi obumsulwa bohlobo lwe-vampire.
IGreat Suckers yokuqala ibe yimpumelelo esheshayo futhi yaba ngomunye wemidlalo eyisisekelo yamakhasino okufanele idlalwe ngalesi sikhathi sonyaka - ngiyaqiniseka ukuthi ungaqagela ukuthi kungani!
Lokhu I-5 reel, umugqa we-3 kanye nomugqa wokukhokha we-25 umdlalo unezici eziningi kufaka phakathi okhethekile 'Umdlalo webhonasi kaVampire Hunt.
Ngesikhathi salesi sici, uzobhekana nemigqomo evela ethuneni lokungcwaba lasendulo. Umgomo wakho ukuvula amabhokisi ukuze uveze i-vampire elele.
Kuwo wonke ama-vampire othola uzothola izinhlamvu zemali. Uma uthola i-bat kunalokho, umdlalo webhonasi uzophela.
IGazi Suckers 2
Izithuthuthu ziqalekisiwe, kunzima kakhulu ukwenza imidlalo ye-2nd noma i-3rd edume njengokuqala.
Yebo, ama-vampires ku-Blood Suckers 2 angaqalekiswa (ngokomela igazi), kepha umdlalo ngokwawo wawungaqalekisiwe!
Nge isilinganiso esiphakeme sokubuyela kumdlali kwe-98%, ihluzo ezithuthukisiwe nezinye izici - i-Blood Suckers 2 ilinganiswe, uma kungengeqi ukuthandwa kwangaphambi kwayo.
4) I-Ghost Pirates
U-One-Eyed Ed, uPeggy Rotten, uPolly noMad Monkey “bayingxenye yomkhumbi futhi bayingxenye yabasebenzi” behlasela amasondo eGhost Pirates yeNetEnt.
Ikhishwe ku-2013, lesi slot sithathe ngokucacile saba nomthelela yi-blockbuster Pirates Of The Caribbean chungechunge, kepha sanika umqondo i-flick ehlekisayo ne-cartoonish.
Ngabe iyabamba namuhla? Ngombono obukwayo, imdala impela - ibukeka nje inemibala, imnandi futhi ijabulisa njengoba yenza eminyakeni ye-6 edlule.
Kukhona ukuntuleka okuphawuleka kwezici ezikhethekile, uphawu lwentengiso yemidlalo yanamuhla yeNetEnt, ngakho-ke umdlalo uqala ukuzizwa ugudle njengamabhisikidi omkhumbi ngemuva kwesikhashana.
Kulungile, sikopela lapha kancane. I-NetEnt's Ozzy Osborne slot empeleni ayiqali kuze kube 21st ngoNovemba 2019, kodwa bekumele silungeze kulolu hlu ngoba sijabule kakhulu ngalo.
Nokho, u-Ozzy wahlafuna ikhanda le-bat ngenxa kaSathane - uma engekho ohlwini lwe-Halloween olucashile, ubani owenza?
AbakwaNetEnt bahlonipha isikhulu sobumnyama ngomdlalo okhethekile oqukethe izici eziningi ezizokugcina uphakathi nesitimela esisheshayo amahora.
Ufuna amabhonasi we-Halloween?
E-NetEnt Casino, i-Halloween iyinto enkulu kabi kithina. Sithanda i-freakin.
Kungakho sikhathaze ithimba lethu lokuklama ukudala ama-Graphics amahle kakhulu futhi amangalisayo we-Halloween futhi sakha nekhasi elihlukile elinikezelwe kumabhonasi e-casino e-Halloween.
Noma ngabe uhlala futhi ubuke amanye amafilimu asabisayo noma ugqoke ukuthusa omakhelwane ngale-Halloween, sethemba ukuthi unayo enhle!
I-100 yamahhala i-spin casino e-Klaver Casino
I-105 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Buzz Casino
I-15 ayikho ibhonasi ye-deposit e-Vegas Mobile Casino
I-140 yamahhala i-spin bonus e-Golden Galaxy Casino
Ibhonasi yekhasino ye-80 spins yamahhala eSuperCasino
I-30 yamahhala e-Paddy Power Casino
I-25 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Winner Casino
I-40 yamahhala i-casino e-Devilfish Casino
I-145 ayikho ibhonasi ye-deposit eMalibu Club Casino
I-85 yamahhala i-spin casino e-Winorama Casino
I-70 ayikho ibhonasi yediphozithi e-Amsterdams Casino
I-115 yamahhala i-spin bonus ku-Jupiter Club Casino
I-115 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi eWinspark Casino
I-55 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Vegas2Web Casino
I-30 yamahhala e-Wintingo Casino
I-60 yamahhala i-spin bonus ku-RobinHood Casino
I-115 yamahhala i-spin bonus ku-This Is Vegas Casino
I-65 yamahhala i-casino e-Chomp Casino
I-100 yamahhala i-casino e-NordicSlots Casino
I-40 yamahhala i-casino e-Silver Oak Casino
I-125 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Slots Plus Casino
Izinhloli ze-150 zama-Playgrand Casino
I-40 yamahhala i-bonus e-KingsWin Casino
I-50 yamahhala i-spin casino e-Diamond Reels Casino
0.1 I-1) I-Wolf's Bane
0.2 2) I-Halloween Jack
0.3 I-3) I-Blood Suckers 1 ne-2
0.3.1 Abamunca igazi
0.3.2 IGazi Suckers 2
0.4 4) I-Ghost Pirates
0.6 Ufuna amabhonasi we-Halloween?
3 Ibhonasi ye-Casino 2019: